Egypt Summons Ethiopia’s Envoy Over Comments – Statement – Kichuu
HomeNewsAfricaEgypt Summons Ethiopia’s Envoy Over Comments – Statement
CAIRO (REUTERS) – (usnew)—THE Egyptian foreign ministry summoned the Ethiopian Chargé d’Affairs to Cairo on Wednesday to provide clarifications over comments made by the spokesman of the Ethiopian foreign ministry, it said.
Egypt Ibsa har’a baafteen Suudaa waliin dhaabbachuun Itoophiyaa akka rukuttu adeessiteetti! Eertiraan kaleessa Itoophiyaa waliin ta’uun Suudaan rukutuuf Waraana ishee gara Daangaa Suudaan sochoosuun ishee ni yaadatama! Har’aas lolli Daangaa Itoophiyaa fi suudaan gidduutti baname itti fufuun suudaan Lafa qotee bulaa Amaaraa too’acha jiraachuun ishee mirkanaa’eera!! Itoophiyaan erga Hacee nyaatte, Jawar hiite takkaa naga’a argatte hin beektu
Parkeologist Biruk Tadesse from San Francisco says: